Xasaasi Dhageyso: Xildhibaanada Cusub oo durba Bilaabay Mooshinkooda ugu horeeyo yaase lagu dhaganyahay ??? – Kismaayo24 News Agency
Xasaasi Dhageyso: Xildhibaanada Cusub oo durba Bilaabay Mooshinkooda ugu horeeyo yaase lagu dhaganyahay ???
by Tifaftiraha K24 2nd January 2017 2nd January 2017 041
Xildhibaanada Baarlamaanka soomaliya ayaa durbaba bilaabay in ay keenan Mooshin lagu dalbanaayo in dib loo fasaxo Xildibaanadii horay doorashadooda loo celiyay ee 5 ahaa kuwaasi oo Guddiga khilaafaadka ay diideen Natiijadii kasoo baxday Doorashooyinka ay galeen.
Xildhibaanada ayaa sheegay in ay haboon tahay in shantaasi xildhibaan aan laga reebin baarlamaanka ,islamarkaana aan lagu laaban doorashadooda.
Waxay ay codsadeen in Xubnahaasi lagu soo daro Baarlamaanka Hada shaqeeyo maadama bay yiraahdeen ay dadaal adag usoo galeen Kamid noqoshaha Baarlamaanka soomaliya ayna haboontahay in la iska cafiyo oo xildhibaanada kale ay la mid noqdaan.
Xildhibaanada qaarkood waxa ay guddoonka ka codsadeen in Dalabkaan uu noqdo mid sharci ah maadama xildhibaanada Baarlamaanka ay yihiin dadkii sharciga dajinayay oo ay qasab tahay in mooshin laga dhigo laalista xildhibaanada 5 ah.
XOG: Donald Trump oo rajo xumeeyay dib u soo noqashada Xasan Sheikh (Sir culus)
War cusub: Ku dhawaad 10,000 Shaqaale Somali ah oo Dalka Sacuudiga loo qaadi doono Kadib Markii Heshiiska Labada Dowladood ay….
Dowlada Somaliya oo war kasoo saartay Xaalada Caafimaad ee Eng Yarisow
Daawo: Sawirradii ugu horeeyay abuu mansuur oo sheegay in uu shabaab ka baxay
War Cusub: Hey’aadda UNHCR oo soo Saartay Tirada ku dhimatay Bada u dhaxeysa Masar iyo Talyaaniga
admin 21st April 2016 21st April 2016